Xayeysiiyayaasha baloogyada safarka | Safarka Absolut
Ma shirkad ka tihiin waaxda safarka oo ma waxaad dooneysaa inaad ku xayeysiiso internetka? Kadib Safarka Absolut waa waxa aad raadineyso. Shabakadeena maaddooyinka waxay ku siineysaa taageerooyin tayo sare leh oo kala jaban si ololahaagu ugu guuleysto.
Waxaan leenahay baloogyo loogu talagalay:
mawduucyada safarka: safarrada, duulimaadyada, meelaha loo safrayo ee leh xeebta iyo badda, iwm.
Waxaan la shaqeynaa qaababka banner-ka ugu weyn ee suuqa - megabanner, xada bogga, Sky, ... - iyo sidoo kale dhammaan noocyada boorarka hodanka ah ee hodanka ah ama isdhexgalka sare. Nala soo xiriir si aad u hesho dhammaan fursadaha iyo qiimaha xayeysiinta.